Facebook Account ကိုPassword Reset တောင်းပြီး Hack လုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နည်း ~ ဘလော့ခရီးသည်
Facebook Account ကိုPassword Reset တောင်းပြီး Hack လုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နည်း
သင့် Facebook Account ကိုPassword
Reset တောင်းပြီး Hack လုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နည်း
Mobile SIM တွေ ထွက်ပေါ်လာတော့ လူတိုင်းနည်းပါးFacebook
ဆိုတဲ့ Social Media ကို အသုံးပြုလာတာတွေ့မြင်ကြရ
လူတိုင်းနည်းပါးသုံးစွဲလာတာနဲ့ အမျှ ပြဿနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ကိုလည်း
Cyber Bullying , Cyber Crime, Personal Attack တွေ
နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဖြစ်ပျက်နေတာ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။
ဘာကြောင့် ဒီလိုတွေဖြစ်ပေါ်လာသလည်းလို့ မေးမယ်ဆိုရင် အများစုက
User တွေရဲ့ ပေါ့လျော့မှုက အဓိက ကျသလို
Account တစ်ခု Hack ခံရတယ်ဆိုတာ အခြေခံအားဖြင့်နည်းလမ်း
၁။ Phishing Method ( Login Page အတုဖြင့်ခိုးယူခြင်း)
၂။ G-mail မှတဆင့် Recovery ဆွဲ၍
Facebook Account ကိုခိုးယူခြင်း
၃။ Facebook ကနေ I Can’t Log In အနေအထားဖြင့်
အများစုက သင်သုံးနေတဲ့ Facebook ကို Forget Passwordကနေလုပ်ဆောင်ကြတာများပါတယ်။
လှမ်းပြီး Password Reset ချဖို့ လှမ်းကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်
www.facebook.com/ ရဲ့ အနောက်က “ CZarni.86 ” ဆိုတာကို
ကော်ပီကူးယူပြီးတော့ Browser တစ်ခုကနေ Forget Password
User ID နဲ့ ရိုက်ပြီးရှာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ သာမာန်အားဖြင့်
Reset Link ချစေမယ့် မေးလ်ကိုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကောင့် ဟက်ဖို့ ကြိုးစားမယ့်သူက Continue ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ
သင့်မေးလ်ထဲကို ရောက်လာတယ်ဆိုရင် ယေဘုယျအားဖြင့်Clikc
here to change your password ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး လက်ရှိသုံးနေတဲ့
Account ရဲ့ Password ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်။ကျတော်တို့က
Didn’t’ request this Change? ဆိုတဲ့နေရာကစာလုံးအပြာ
Let us know immediately ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ့မယ်။
ကျတော်တို့က OK ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါ့မယ်။ ဒါဆိုရင်တော့
too many password reset email? ဆိုတဲ့ နေရာမှာTurn Off
Reset for my Username ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ့မယ်။ထို့နောက်တော့
သင့်အကောင့်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်ကUser ID ကို
အသုံးပြု၍ Password Reset request လုပ်ခြင်းမှကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Forget Password လုပ်တဲ့နေရာမှာအောက်ဖော်ပြပါအချက်တွေက
၁။ Account User ID
၂။ Facebook User E-mail
၃။ Facebook User Phone Number တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
နံပါတ် ၁အချက်ဖြစ်တဲ့ Account User ID နဲ့ Reset Requestလုပ်ခြင်းကို
ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ကျတော်တို့က မယုံလို့ စမ်းကြည့်ရအောင်လားဗျာ…
အရင်ဆုံး Browser ကို ဖွင့်လိုက်ပါမ့ယ်ထို့နောက်တော့
အကောင့်ရဲ့ User ID နဲ့ Wrong Password ကိုရိုက်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ်။
ထို့နောက်တော့ Pass မှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်Forgot
your Account ဆိုတဲ့နေရာမှာ User ID ကိုထည့်ပြီးSearch လုပ်လိုက်ပါမယ်။
သင်လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ User ID ကိုမရှိလို့တစ်ခြားနည်းလမ်းဖြင့်ရှာပါ
၁။ Account’s Mail
၂။ Account’s Phone စသည်တို့ကို
လုံခြုံအောင်ထားနိုင်ရင်တော့ အဆင်ပြေပြီး ယခုလိုမျိုး
User ID နဲ့
ဟက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးဆင်ပြေမယ်လို့ ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။